ရန်ကုန်တွင်သေဆုံးနိုင်သောနည်းပေါင်းတစ်ထောင် – Pann Satt Lann Books
ကြည်နုသော လျှပ်စစ်မီးတိုင်များက ရန်ကုန်၏ ရွှေရည်လောင်းခဲ့သည့် နံနက်ခင်းနှင့် နေပြင်းကျခဲ့သော ခေတ်တစ်ချို့အကြောင်းကို စုပ်တသပ်သပ် ပြောပြမည်။ သမိုင်းအဆက်ဆက် သွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲများမှာ ပါဝင်ခဲ့သော ရန်ကုန်၏သွေးစများက ညမီးကျည်များအောက် ယခုတိုင် ပေကျန်ဆဲ ရှိနေသည်။ တချို့သောဇာတ်လမ်းများက ဇာတ်လမ်းရှည်တစ်ပုဒ်ရေးသားဖို့ တိုတောင်းသလို ဇာတ်သိမ်းပိုင်းသည်လည်း မလှပခဲ့။
ဒီစာအုပ်ဟာ စာရေးသူ ကိတ်မုန့်ရဲ့ တတိယမြောက် လုံးချင်းဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ ကိတ်မုန့်ဟာ ဝတ္ထုရေးသားဖန်တီးမှုအားဖြင့် ၂၀၁၆ကစလို့ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာတချို့မှာ ဝတ္ထုတိုများနဲ့ ပါဝင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင် သေဆုံးနိုင်သော နည်းပေါင်းတစ်ထောင်ဝတ္ထုဟာ သူ့မြင်ကွင်းထဲ ဖြတ်ခနဲ ဝင်လာတဲ့ သတ်ကွင်းတွေနဲ့ အန္တရာယ်ရောပြွန်းနေတဲ့ ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်တွေကို ကြည့်ရင်း ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတာများကို သူ့မှာရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာလို့ စာရေးသူက ဆိုလာပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုမှာ သေဆုံးခြင်းနည်းပေါင်းတစ်ထောင်ကို မြင်တွေ့ရမယ် ဆိုပေမယ့် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ် ။
စာရေးသူကတော့ သူ့အမာခံပရိတ်သတ်နဲ့ သူ့ဝတ္ထုတိုများဖတ်ခဲ့ဖူးရင် သူဖွက်ထားတဲ့ ဥတွေကို ဒီဝတ္ထုမှာ တူးဖော်ရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
5.2 × 0.5 × 8.2 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2021 ဒီဇင်ဘာလ၊ (ပ-ကြိမ်)
ရန်ကုန်တွင်သေဆုံးနိုင်သောနည်းပေါင်းတစ်ထောင် အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု4ရှိပါသည်။
Bookalicious – March 9, 2022
(၁၈) ရာစုအလယ်‌အထိ ရန်ကုန်ဆိုတာ ဒဂုံအမည်ရှိတဲ့ တံငါရွာလေးတစ်ရွာပေါ့…
၁၇၅၅ ခုနှစ်တွင် အလောင်းမင်းတရားသည် ဧရာ၀တီမြစ်တစ်လျှောက် ဒေသများကို သိမ်းယူစုစည်းရာမှ ဒဂုံအထိ ခရီးပေါက်ခဲ့သည်။ ရန်အပေါင်း ကုန်စင်သွားသောကြောင့် ရန်ကုန်ဟု အမည်တွင်စေခဲ့သည် …
ရန်ကုန်ဆိုတာ ယူတတ်ရင် ပညာတွေ သင်ယူမကုန်နိုင်လောက်အောင် များပြားတဲ့ပညာရပ်တွေစုစည်းရာ နယ်မြေ၊ တိုးတက်မှုများစွာရဲ့အောင်မြေ၊ ချစ်ခြင်းရဲ့ နယ်နိမိတ်၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ …
အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတတ်သလို ရန်ကုန်သည်လည်း ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ဆည်းပူးခြင်းဆိုတဲ့ မှန်ကြေးမုံ‌၏နောက်ဘက်မှာ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ လှည့်ဖျားခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်းဆိုတဲ့ အရာတွေလည်းပဲ ဒွန်တွဲလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း …
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သက်၀င်လှုပ်ရှားပုံတွေ၊ ရန်ကုန်ရဲ့ လမ်းတွေ၊ မြို့ပြနေထိုင်မှုစရိုက်တွေနှင့် လူတွေရဲ့ အတ္တ၊ မာနနှင့် ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း စတဲ့ အကြောင်းအရာများ …
ရန်ကုန်မှာ ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားရင်း ရုန်းကန်ရပ်တည်နေကြတဲ့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် လူငယ်တစ်စုရဲ့ သူတို့ရပ်တည်ကြရာ နယ်ပယ်အတွင်း ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခက်အခဲများ၊ မြို့ပြနေထိုင်မှုစရိုက်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြား သေဆုံးသွားတဲ့ အသက်များ၊ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ ဘ၀များ၊ LGBTQ+ တို့၏ လူတွေရဲ့ ဘောင်ခတ်ပြီးကြည့်တတ်တဲ့မျက်၀န်းအောက်က ဘ၀များ၊ အကျဉ်းထောင်ထဲက တန်ဖိုးမရှိတဲ့ အသက်များအကြောင်း၊ ဆေးဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဖျော်ဖြေမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ Event Planner၊ စီးပွါးရေးနယ်ပယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတဲ့ Struggling Life အကြောင်းအရာများ …
” ဆရာ… အရင်က ကိုယ်အင်္ဂါခွဲစိတ်မှုတွေ လုပ်ဖူးပါသလား ”
” လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်… ဆေးရုံမှာပါ။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေလည်း ပါပါတယ် ”
” သေသူမှာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါလဲဆရာ ”
Criminal တစ်ခုနှင့် ဇာတ်လမ်းကိုစတင်ထားပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Character Introduction ပြီးနောက် ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အချိတ်အဆက်မိမိရေးဖွဲ့ထားတာကြောင့် ဖတ်နေရင်း ဘာများဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ ဇောနဲ့ အမြဲမွန်းကြပ်ရပါတယ် … အဆုံးသတ်မှာ သိလိုစိတ်များစွာနဲ့ အဖြေရှာရင်း ကျန်ခဲ့ရမယ့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ ….
အချစ်ဟု ထင်မိ၍ ဖမ်းဆုပ်ရာမှ နာကျင်ကြေကွဲနေသော နော်အဲလစ် …
အချစ်ကိုမရှိမဖြစ်ဟု ခံယူထားပြီး တစ်စုံတစ်ဦးက တံခါးခေါက်လို့ ဘ၀ထဲ၀င်လာမည်ဆိုတော့လဲ ဘယ်တော့မှ မယုံကြည်ရဲသည့် အင်ကြင်းမေ …
ကံကိုပုံလို့ အချစ်နှင့် ကွေကွင်းရသော ဒုက္ခသည်မလေး ဗီဗီယန် …
အချစ်ကို ဘယ်တော့မှ အယုံအကြည်မရှိဘူးလို့ အော်နေတတ်သူ အောင်သူရိန်ထွန်း …
၅၂၈ နှင့် ၁၅၀၀ မေတ္တာလွန်ဆွဲပွဲ အတွင်းက ကျော်ကျော် …
ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ မွန်းကြပ်စရာနေထိုင်မှုစရိုက်တွေရယ်၊ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားထဲက ချစ်ခြင်းသံယောဇဉ်တွေရယ်၊ ပါတီတွေ၊ Drag Queen တွေ၊ LGBTQ အကြောင်းတွေရယ်၊ အကျဉ်းထောင်ထဲက အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေရယ်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးသွားကြရတဲ့ ရန်ကုန်နေလူထုရဲ့ ဘ၀တွေ နှင့် သေမင်းရဲ့ ခြေသံများ …
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရန်ကုန်ကို နောက်ထပ် လူငယ်ပေါင်းများစွာ ရောက်ရှိလာကြဦးမှာပါ …
တချို့က လှမ်းတစ်၀က်မှာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးသွားကြမယ်
တချို့က ရန်ကုန်ရဲ့ လှည့်စားမှုတွေကြား ရုန်းကန်ရင်း ဘ၀ပျက်သွားမယ့်သူတွေရှိသလို
တချို့က မရိုးအီနိုင်တဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့သေဆုံးမှုတွေကြားမှာ အသက်နှင့် ခန္ဓာအိုးစားကွဲသွားကြလိမ့်မယ်
ရန်ကုန်မြစ်ရေသည်လည်း ဆက်လက်စီးဆင်းနေစမြဲ ….
#[email protected] #π|@¥
Ko Pauk Mdy – May 2, 2022
“ရန်ကုန်မြို့တွင် နေနည်းတစ်ထောင် “
စာအုပ်အမည်က” ရန်ကုန် တွင်သေဆုံးနိုင်သော နည်းပေါင်းတစ်ထောင်”ဆိုဘဲ။
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လိုက်ဖတ်ရင်း တွေ့သွားတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါနဲ့ဘဲ ဝန်ဇင်းကို လှမ်းမှာလိုက်တော့တာပေါ့။ လူကြုံရှိတာကြောင့် သိပ်မကြာခင်ဘဲ စာအုပ်ကလက်ထဲကိုရောက်လာပါတယ်။ အလုပ်နည်းနည်းပါးတဲ့နေ့မှာ စပြီး ဖတ်ကြည့်တော့တာပေါ့။ စစခြင်းအခန်းမှာ လူသေမှုတစ်ခုနဲ့ စဖွင့်လိုက်တယ်။ စစ်တာ ဆေးတာတွေကို ဖတ်မိတော့ စုံထောက်ဝတ္တုလား ရင်မသဲဖိုလားထင်လိုက်မိသေးတယ်။ ထင်တာတွေနဲ့လွဲပါတယ်။
အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ တည့်တည့်တိုးသွားတာမို့ပါ။
ဆေးကျောင်းသူ ဆေးကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခင်မေကြည် နဲ့ ဘုန်းပြည့် ၊ ဘာဘရာ နဲ့ ဇော်ထွန်း တို့ က အတွဲတွေ အင်ကြင်းမေ ၊ မောင်ပွ နဲ့ အောင်သူရိန်ထွန်းတို့ကတော့ အလွတ်တွေပေါ့။
အဲ့မှာ ဆေးကျောင်းသူ ဆေးကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ ဝတ္တုကိုစဖွင့်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဆေးကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ အောင်သူထွန်း ရယ် အင်ကြင်းမေရယ်နှစ်ယောက် နဲ့အတူ အောင်၊ကျော်ကျော် ၊ဗီဗီယန်၊ နော်အဲလစ် ၊လီလီဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်အသစ်တစ်ယောက်တွေ ပေါ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ ညခင်းသာ(Night Out) ထွက်လေ့ရှိကြတဲ့ အင်မတန်မှ စွဲမက်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ (၁၉)လမ်းက ဘီယာဆိုင်တွေအကြောင်းကနေစလိုက်ရာကနေ နော်အဲလစ်ရဲ့ ဘဝအတွေ့ တွေဆီ ရောက်သွားပါတယ်။
နော်အဲလစ်နဲ့အတူ ဦးမျိုးသူထွန်း ဦးစိုးဝံ့မောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုဆွဲထုတ်လာပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆေးဆိုင်လောက၊ ဆေးကုမ္မဏီလောကအကြောင်းတွေ၊ ဗီဗီယန် နဲ့ ကျော်ကျော် ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကြော်ငြာမော်ဒယ်လောကနဲ့အတူ မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ဘဝတွေကို လှစ်ဟပြပြန်ပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီး ခင်မေသိန်း၊ အစိုင်း၊ ကုဋေမင်းသွေး၊ ဂျင်မီ၊ ဂျိမ်း၊ ပျဉ်းမနားသား အစရှိသောဇာတ်ကောင်တွေကို တသီကြီး ဆွဲထုတ်ပြရင်းကနေ ထောင်လောကနဲ့ စီးပွားရေးဈေးကွက်ဆက်စပ်နေတဲ့ ဂွင်တွေအကြောင်း၊ လိင်တူ ချစ်သူတွေ ဘဝဖြစ်တဲ့ LGBTလောက၊ အခြောက်(ခ)ဂေးလ်တွေရဲ့လောကနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ မူးယစ်ဆေးကိစ္စ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိစ္စ၊ လစ် လို့ခေါ်တော့ ယောက်ျားလျာ တွေရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်လမ်း၊ သီးသန့်ပါတီပွဲကိစ္စတွေကို တစ်စစီ ဆွဲထုတ်ပြသွားလိုက်တာ တကယ့်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် စုံစုံစိစိပါဘဲ။
ဒီစာအုပ်ရေးသူကို သဘောကျမိတဲ့အချက်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့မှ ာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ မှုခင်းတွေနဲ့ သူ့ဇာတ်ကောင်ကို လှလှပပ ချိတ်ဆက်ပြီး ဇာတ်လမ်းထဲကိုဆွဲထည့်သွားတာပါဘဲ။
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ စာရေးသူ အတော်များများက ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်ယောက်ကို အင်တာဗျူးပြီးဖြစ်စေ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးဖြစ်စေ စာအုပ်စာတမ်းတွေကဖြစ်စေ ဂူဂဲလ်က ဖြစ်စေ အချက်အလက်တွေရှာဖွေပြီး ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲ့လိုစာမျိုးတွေမှာတစ်ခါတစ်ရံ လက်တွေနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ အချက်အလက်တွေပါတတ်ပါတယ်။
အခုဒီစာအုပ်မှာတော့ စာရေးသူရေးထားတဲ့လောကသားတွေရဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေကိုဖတ်ရတာ စာတွေဆိုတာထက် ကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်သိမြင်ပြီး ရေးတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်လောက်အောင်ကိုပြည့်စုံတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ထည့်မပြောတာကတော့ ဒီစာအုပ်က ဇာတ်လမ်းသိသွားရင် ဖတ်မကောင်းတော့မှာသေချာလို့ပါ။
စာရေးသူက သူ့ဇာတ်ကောင်တွေ တစ်လှေကြီးကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လှပစွာချိတ်ဆက်သွားတာကို ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီး ခံစားစေချင်လို့ ဇာတ်လမ်းကို ချမပြတာပါ။
ဒီအထဲမှာ ဖတ်နေရင်း ပြုံးမိရတဲ့ စာသားလေးတွေပါ ပါတယ်။
“ ငံပြာရေတွေ လာမှောက်နေတော့မယ်“
“ ကောင်လေးက စင်အောင်ဆေးစားရင် စင်ပါတယ်“ဆိုတဲ့ မိန်းမလျာတွေ သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ စကားလေးတွေပါဘဲ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ စာရေးသူက ဉာဏ်ကွန့်မြူးပြီး ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲနွဲ့လေးတွေ ရေးတတ်ကြပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အားထုတ်မှုလို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကိုတော့ ရှေးရိုးဆန်သော၊ သမားရိုးကျအတွေးအခေါ်များနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေးစံများဖြင့်ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝကိုက်ညီမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့လိုလူတွေကလဲ ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရင် နှာခေါင်းရှုံ့ကြမှာ အသေအချာပါဘဲ။ သို့သော် ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ က တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုတော့ ငြင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို တင်စားကြည့် မယ်ဆိုရင် အလိုမတူဘဲ လူတွေကိုလက်ခံနေရတဲ့ မြို့ ကြီးတစ်မြို့လို့တင်စားချင်ပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာရှိနေတဲ့ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိသူ စွန့်စားချင်သူ လူကြီးလူငယ်မှန်သမျှဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမမြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဆီကိုမျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်နဲ့ ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်မြင်သွားသူရှိသလို ကျရှုံးသွားသူတွေလဲ အများကြီးပါဘဲ။ လမ်းပေါ်ရောက်သွားသူရှိသလို လမ်းပျောက်သွားသူတွေလဲ တစ်ပုံကြီးပါဘဲ။ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်မိခဲ့ရင်ဖြင့် ရန်ကုန်မှာ အသက်ရှင်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က တော့ ဒီစာအုပ်လေးကို ကြိုက်တယ်။
Sakawar – May 11, 2022
စာရေးသူ ကိတ်မုန့်ကို စတင် သတိထားမိတာ ရွှေအမြူတေ မှာ ပါတဲ့ ” ပန်” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုမှာပါ။ ကွဲထွက်နေတဲ့ အတွေး၊ ဆန်းသစ်တဲ့ တင်ဆက်မှု နဲ့ မတူညီ တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ရေးပြထားတဲ့ “ပန်” ကို ဖတ်ရတော့ “ခြေစွပ်တဖက်” ကိုပါ လိုက်ရှာ ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အခါက အူလည်လည် ဖြစ်ရတဲ့ အချို့အချက်တွေကို သည် စာအုပ်ဖတ်မှ နားလည်ရပါတော့တယ်။
ဆရာကိတ်မုန့်အနေနဲ့ သည် စာအုပ်က တတိယမြောက် လုံးချင်းပါ။ ရှေ့မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ” ကျွန်မ နာမည် ခင်မေသိန်း” နဲ့ ” ချစ်သော” တို့က တမျိုးတမည် ဆန်းသစ်တဲ့ တင်ဆက်ရေးသားမှုမျိုးပါ။ ” ချစ်သော” က ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေမဲ့ အဓိက ဇာတ်ဆောင်တွေက ပြင်ပက သရုပ်မှန်တွေနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် စိတ်ကူးယဥ် ဇာတ်လမ်းသက်သက် ဖြစ်သွားရတာ သမျောစရာပါ။ ( ကိုယ်ပိုင်အတွေးမို့ ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးများအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်.. စကားချပ်) ဒါပေမဲ့ ရွှေမောင်း၊ ရှမ်းလေးနဲ့ နော်ခူကိုတော့အမြဲ အမှတ်ရနေမှာပါ။
တတိယမြောက် အားထုတ်မှုဖြစ်တဲ့ “ရန်ကုန်တွင်….” ကတော့ စာရေးသူရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ သိုသိပ်ထားတဲ့ ရင်တွင်း အမြူတေကို ဖွင့်ချပြထားသလိုပါပဲ။ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာ ပျော်စရာ၊ ကြည်နူးစရာ၊ ကျေနပ်စရာ၊ အံကြိတ်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာ၊ လွင့်ပျောက်ချင်စရာ ခံစားချက်တွေကို တစုတည်း ဖတ်ရသလို ခံစားရပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်များစွာ ပါဝင်ပြီး ပါဝင်ဇာတ်ကောင်တွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ လူသားဆန်စေခဲ့တဲ့အတွက် ဖတ်ရတာ အင်မတန် အားရမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် LGBT များရဲ့ အတွင်းမနော၊ ရင်တွင်းခံစားချက်နဲ့ လှုပ်ရှားရပ်တည် ပုံတွေကို အသေးစိတ် လေ့လာ ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေ သာမက သူတို့နဲ့ ဆက်နွယ်သူတွေရဲ့ ရုန်းကန်တည်ဆောက် ပုံတွေကို ထဲထဲ ဝင်ဝင် စေ့ငုခွင့်ရရင်း ရန်ကုန်မှာ သေဆုံးစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာက သိက္ခာကိုလား၊ ဘဝတွေကိုလား၊ အသက်ခန္ဓာကိုယ် ကိုလား ဆိုတာ တွေးဆ မိရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး မေ့လုမေ့ခင် ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်လေး ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှုကို ဇာတ်ကွက်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းရေးပြထားတာ အထူး ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ထို့အတူ ထောင်တွင်းက စုပ်သပ်စရာဖြစ်တဲ့ နိုင်လိုမင်းထက် ပြုပုံများကို ရေးပြထားပုံတွေက အတော့်ကို ပိရိသပ်ရပ်ပါတယ်။ သဘော်ပေါ်က သက်တန့်ပွဲကို အသေအချာ ထည့်သွင်းရေးပြထားတော့ အွန်လိုင်းမှာ ရုပ်သေကားချပ်အဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို အာရုံဖြန့်ကျက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင် လီလီ နဲ့ သူသူတို့ အပြိုင်ကြဲကြတဲ့ အကပြိုင်ပွဲ ဇာတ်ကွက်တွေကို ဖတ်ရချိန်မှာ မြင်ကွင်းတခုကို လွမ်းမိသလိုပါပဲ။ အတော်ဝေးကွာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ သခင်မြ ပန်းခြံ မြက်ခင်းပေါ်က ပိတ်ကားချပ်ကြီးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု အပြည့်နဲ့အရွယ်စုံ လူတွေကိုပါ။
ဇာတ်ကောင် လီလီ ဟာ လောကကြီးမှာ လူစား နှစ်မျိုးပဲ ရှိကြောင်း သရုပ်ဖော်သွားတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ လောကကြီးမှာ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ၊ LGBT စသည်ဖြင့် မခွဲခြားပဲ ကြည့်လိုက်ရင် လူတွေလို့သာ မြင်လာမှာဖြစ်ပြီး လူတွေမှာ လူဆိုးနဲ့လူကောင်း သည် နှစ်မျိုးထဲပါပဲ ဆိုတာပါ။
ပြောစရာဆိုလို့ စာလုံးပေါင်း နဲ့ ခွဲထားလေးတွေ လွဲ နေသေးတာပါ။ အရင် စာအုပ်တွေနဲ့ ယှဥ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အတော့်ကိုတော့ နည်းသွားပါပြီ။ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံလေးတွေ လွဲတာက ပန်းဆက်လမ်းရဲ့ tradmark လေးပါပဲလို့ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သဘောပိုက်လိုက်ရပါရဲ့။
တခုတော့ မဖြစ်မနေပြောချင်ပါတယ်။ စာ ၁၃၅ မှာပါတဲ့ “ပူစီ ရနံ့သင်းသော မိုဂျီတို” ဆိုတာကိုပါ။ ဖန်တီးသူက ပူစီနံ ရနံ့ လို့ ရေးပြချင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ Mojito က rum base cocktail ကိုမှ sweet n sour flavour အချိုးကျ ပေါင်းစပ်ထားပြီး soda အုပ်လို့ ပူစီနံ အရွက် နဲ့ freshness ရအောင် ဖန်တီး ထားတာပါ။ အရမ်းသောက်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ပူစီနံ အရွက်ရဲ့ ရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့မို့ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ cocktail ကို “ပူစီရနံ့ သင်းသော”လို့ ဖတ်လိုက်ရတာ ဖီးလ်တော့ အတော် ငုပ်သွားမိပါတယ် ။
ပသို့ဆိုစေ။ ကိုယ့်ရဲ့ လတ်ဆတ် တဲ့ အမှတ်တရ အတော် များများ ရှိခဲ့ရာ၂၀၁၃…၂၀၁၄ ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည် တမ်းတငေးမောခွင့် ရခဲ့တဲ့ ဆရာကိတ်မုန့်ရဲ့ ” ရန်ကုန်တွင်….” ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်မိပါတယ်။